दूध र केरासँगै खाँदा फाइदा कि बेफाइदा विज्ञ यसो भन्छन् ! - Everest Dainik - News from Nepal
दूध र केरासँगै खाँदा फाइदा कि बेफाइदा विज्ञ यसो भन्छन् !
लक्ष्मी थापा क्षेत्री
केरा र दूध दुवै पोषक तत्वले भरपूर हुन्छन् ।
प्रायः जसो मानिसले आफ्नो मसल्स बनाउने तयार गरिरहँदा उनलाई केरा र दूध खान सल्लाह दिइन्छ ।
त्यस्तै बनाना शेक पनि मानिसलाई मनपर्ने पेय पदार्थमध्येको एक प्रसिद्ध पदार्थ हो । तर, विशेषज्ञहरुका अनुसार केरा र दूध एकैसाथ सेवन गर्नाले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउन सक्छ । यसले शरीरको विभिन्न अंगहरुको फंगशनलाई पनि प्रभावित पार्छ ।
आयुर्वेदमा पनि केरा र दूध एकैसाथ खानुलाई नराम्रो मानिन्छ ।
साइनस हुने खतरा
एक अध्ययनका अनुसार केरा र दूधको मिश्रणले हाम्रो पाचन तन्त्रलाई नराम्रो तरिकाले प्रभावित पार्छ । जसले गर्दा साइनस सम्बन्धी समस्या हुने खतरा हुन्छ ।
पेटमा ग्यासको समस्या
भारतका आयुर्वेदाचार्य डा.सरोज पाण्डेका अनुसार केरा र दूध दुवै पौष्टिक खाद्य पदार्थ हुन्, तर, दुवै खाँदाको समय २० मिनेटको फरकमा खानुपर्छ । अन्यथा यसले पेटमा ग्याष्ट्रीकको समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ ।
शरीरमा विषाक्त पदार्थको उत्पन्न हुन्छ
आयुर्वेदका अनुसार कुनै पनि ठोस फलको कुनैपनि तरल पदार्थमा समायोजन हुुनुलाई राम्रो हुँदैन । केरा र दूध सँग–सँगै खानाले शरीरमा विषाक्त तत्व उत्पन्न हुन थाल्छ । यसले शरीरको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमाथि नराम्रो असर पार्न सक्छ ।
शरीर गह्रुँगो बनिरहन्छ
केरा र दूध एक साथ खानाले शरीर गहुँगो बनिरहन्छ र मस्तिष्कको क्षमतामा पनि कमि आउन थाल्छ ।
ट्याग्स: Milk and banana